TOP NEWS:-Wararkii u Dambeeyay ee Kulankii uu Baarlamaanka uu Maanta ka yeeshay Arrinka Qalbi-dhagax | Saadaal Media
TOP NEWS:-Wararkii u Dambeeyay ee Kulankii uu Baarlamaanka uu Maanta ka yeeshay Arrinka Qalbi-dhagax
Xarunta Golaha Shacabka waxaa goordhaw ka furmay kulan ay leeyihiin Xildhibaanada Golaha Shacabka, waxaana ajndayaasha kulanka looga hadlayo maanta qeyb ka ah Dood ku saabsan Dhiibistii Xukuumada Soomaaliya Itoobiya ku wareejisay Qalbi Dhagax.
Kulanka Baarlamaanka ee ka socda xarunta golaha Shacabka waxaa soo xaadiray 157-Xildhibaan, waxaana kulanka shir guddoominaya Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Xildhibaanada ayaa kulankooda ku bilaabay ka doodista Ajandaha ku aadan Dhiibistii C/Kariin Qalbi Dhagax iyo Go’aankii Xukuumada Soomaaliya kasoo saaray Dhiibista Sargaalkaasi iyo Jabhada ONLF .
Xildhibaanada Baarlamaanka ee is qoray kana doodaya ajandahan ayaa ah labo garab Xildhibaanada qaar ayaana aad u taageersan go’aanka Xukuumada Soomaaliya ee arinta Qalbi Dhagax halka Xildhibaano kalana ay arintaasi kasoo horjeedaan.
Doodda Xildhibaanada Aqalka hoose ayaa si xamaasad leh uga socota Xarunta Golaha Shacabka, waxaana Xildhibaan kasta fursad loo siiyay daqiiqado uu kaga hadlo ajandahan kagana dhiibto aragtisiisa.
Waxaa suurto gal ah marka ay dhamaato dooda Xildhibaanada Golaha Shacabka in Ajandahan cod la galiyo lana soo afjaro, halka warar kalana sheegayaan in Ajandahan loo gudbiyo guddiga joogtada Baarlamaanka Soomaaliya.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa ka dhursugaya go’aanka ay Xildhibaanada Baarlamaanka ka qaadan doonaan arinta Qalbi Dhagax oo xiiso badan abuurtay , waxaana la filayaa in Baarlamaanka go’aan arinan ka gaaraan lana soo afjaro hadal heynta arintan.